Ungasusa kanjani iphunga elivela ku-microwave?
Namuhla cishe zonke izindlu zine- microwave . Ngokuvamile kuvame ukudla noma ukupheka ukudla okulula. Kungenzeka ukuthi ukudla okushiswa ngesikhathi sokupheka. Khona-ke iphunga elimnandi lokushisa livela ku- microwave . Noma walungisa isidlo ngesiphunga elibukhali kule microwave, elondolozwe ngisho nangemva kokuba isithando somlilo sesilahlile. Ukuze ususe iphunga kule microwave, kunezindlela eziningana.
Indlela yokugeza i-microwave ukuze ususe iphunga?
Ukuze ususe iphunga emayinjini, kufanele udlule ngemuva kokusetshenziswa ngalunye, ushiye i-ajar yomnyango okwesikhashana.
Hlanganisa izindonga zehhavini ngesisombululo esibuthakathaka seviniga noma soda, bese ususa isisombululo esisele ngendwangu emanzini ahlanzekile. Ungavumeli amanzi ukuba afake ukuvulwa kwehhavini.
Ukuze ususe iphunga lokushisa, ungabilisa ku-microwave ngamaminithi angu-7-10 emanzini anamandla kunayo yonke. Kanye ne-steam eyakhiwe ngesikhathi sokubilisa, iphunga lizosuswa ngomoya wokuphuza umoya. Bese uvula umnyango wokuvota.
Kuyasiza ukususa umuthi onobuhlungu obunamathele omuncu omuncu: sula izindonga zehhavini ngendwangu ngokunamathisela, cwilisa amahora amaningana uphinde uhlanza ukunamathiswa ngamanzi kanye nokukhipha amanzi. I-pasta izohambisana nejwayelekile kunazo zonke, ezingabizi.
I-absorption ihle kakhulu yonke iminwe yokupheka usawoti. Thele ngendwangu encane esitokisini encane bese uyibeka ubusuku obuningi kuhhavini ye-microwave nomnyango uvaliwe.
Iphunga elise-microwave lithinteka kakhulu nge-anyanisi eluhlaza noma eziningana ezibhebhethelwe ezibhebheni ezishiye kuhhavini ebusuku.
Uma ulahla iphunga elimnandi lingasiza amayeza omuntu, sebenzisa i-spray ekhethekile noma umuthi wokuzivikela ovini. Faka isicelo ezindongeni zangaphakathi ze-microwave bese ushiya ubusuku bonke. Ekuseni, gcoba ihhavini ngamagundane ambalwa afakwe emanzini afudumele ahlanzekile, bese ushiya umnyango uvulekile ukuthumelela.
Njengoba ubona, ukususa iphunga emayinini ye-microwave kulula kakhulu. Kudingekile kuphela ukusebenzisa iseluleko esisodwa.
Ungasusa kanjani amagundane endlini yangasese?
I-Whitening i-tulle ne-hydrogen peroxide
Kunokuba ususe ama-stain kusuka ekuthungeni izingubo?
Ungagcina kanjani amabhuthri enjoloba?
Ungakugeza kanjani izingubo?
I-moth yokudla - indlela yokukhipha?
Ungasusa kanjani ama-waveps ezweni?
Ukulwa nezinundu ekhaya
Indlela yokwelula izicathulo ekhaya - izindlela eziphephile futhi ezisebenzayo kakhulu
Kunokuba ugeze igazi ezingubo?
Ungakhonsa kanjani ibhokisi elingezansi ngaphandle kokusula?
I-trimmer igcina uma ucindezela igesi
I-Hyacinth ngemuva kokubhakabhaka - indlela yokusiza isitshalo se-overwinter?
Kungabe kube khona umkhuhlane ngesikhathi sokukhulelwa?
I-Millet porridge ene-ithanga - iresiphi
Ukuqokwa emva kokubeletha - ukuthi benzeni?
Ukuthuthukiswa ngokomzimba kwezingane
Ama-blueberries - izakhiwo eziwusizo nokuphikisana
Izinhlobo zokufakelwa kusuka ku-plasterboard
UBretney Spears waqhayisa i-virtuoso fuette futhi weqa nge-twine
Ukuzivocavoca emva kokubeletha
Umkhuba weshukela egazini kwabesifazane - izinkomba zithini?
Indlela yokuhlanza i-carpet kusuka emathini?
I-cottage shizi - okuqukethwe kwekhalori
Hazelnut - ukutshala nokunakekelwa
Ukugqoka kwehlobo ngezandla
I-smart watch 2016
I-milkshake yaseNdiya: i-lassi ibhanana
Kanjani ngokushesha ukuhlanza isisu kanye nezinhlangothi?